Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray dalka Ethopia. – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray dalka Ethopia.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya Mudane, Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta gaaray magaalada Gondar, ee gobolka Baxar-daar dalka Itoobiya, waxaana halkaasi kusoo dhaweeyay Mas’uuliyiin kala duwan oo wadankaasi ka tirsan.
Soo dhaweynta Madaxweynaha waxaa ka qeyb qaatay Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo Madaxweynaha Eretrea Isaias Afwerki oo halkaas kaga sii horeeyay.
Kulan sadex geesood ah ayaay masuuliyiintaan halkaas ku yeelanayaan,wuxuuna kulankoodu qayb ka hayay heshiisyo ay horay sadexdaan dal u wada galeen oo ku saabsan isdhexgalka Bulshada iyo koboca dhaqaalaha waxaana lagu wadaa in gabagabadiisa ay ka soo saaraan War Murtiyeed ku aadan waxyaabihii ay ka wada hadleen.
Sida uu warbaahinta u sheegay agaasimada warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya C/nuur Maxamed Axmed.
Dhanka kale waxaa maanta magaalada Muqdisho ee Caasimada dalka Soomaaliya maanta ka degtay diyaarad ay leedahay Shirkadda Diyaaraddaha Ethiopian Airlines oo duulimaadkeedii ugu horreeyay ee gancsi ah Soomaaliya ku tagtaysa mudo 41 sano ka dib.
Duulimaadkaan oo dhawaan hindisahiisa la shaaciyay ayaa si wayn looga dhursugayay waxaana uu qayb ka yahay hormarada ay bilooyinkii ugu danbeeyay ku talaabsanayeen wadamada ku yaala geeska Africa.
← DHAGEYSO Maamulka gobolka Banaadir oo sheegay inay nidaam u dajiyeen qorshaha maamulka
Dad badan oo ku dhintay qaraxyo galabta ka dhacay Muqdisho →